Sababta Itoobiya u dhisanayso ciidammada badda Maxay tahay? | Raadgoob
Sababta Itoobiya u dhisanayso ciidammada badda Maxay tahay?
Balse hadda dib ayay uga fiirsanaysaa go’aankaas, waxaana muuqata saansaan ah in ay raadinayso saldhig baddeed oo laga doonayo dalalka dariska la ah.
Ra’isulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhawaan taleefishinka dalkaasi ka yiri “Waxaan dhisaynaa ciidammo xoog badan oo baddeed, kuwaas oo ugu xoog badan Afrika”.
Image captionDekadaha ay Itoobiya isticmaasho
Image captionAbiy Axmed
Image captionLabada dal waxa dhexmaray dagaal 2 sano qaatay
Image captionItoobiya ayaa dhul ka heshay magaalada Lamu ee dalka Kenya
Timothy Walker oo ka tirsan mac-hadla ISS ayaa qaba in Itoobiya ay tobonaan sano ku qaadan karto in ay dhisato ciidammo badeed, balse wuxuu qirey in ay samayn karaan laamo yaryar oo xagga badda ah.
Image captionShiinaha ayaa ka mid ah ciidammada saldhigga ku leh Jabuuti
Waxa uu xusay in dalalka Afrika badankood aysan lahayn saldhigyo ciidan bad oo ku filan, kuwa lehna ay yihiin dalalka shisheeye ee xoogga baddan soo dul dhigay gobolkan.
Sidaas oo ay tahay, Itoobiya waxa ay u muuqataa in ay ka go’antahay in ay dhisato ciidamo bad.